Antananarivo: renivohitra manao haingon'ambanivohitra
2010-09-24 @ 13:47 in Andavanandro
Samy manana ny haingo sahaza azy avokoa ny tanàna tsirairay avy. Raha renivohitr'i Madagasikara kosa i Antananarivo dia tokony ho taratry ny maha-tanàna lehibe sy mivoatra ary fitaratry ny firenena manontolo izay. Toa tsy mifanaraka amin'izany fandrosoana izany kosa ny haingo tadiavina atao manerana ny tanàna andalam-pananganana amin'izao fotoana izao. Asa noho ny vola maika sintonin'ireo manao ny asa ve sa ahoana fa dia tahaka ny ho zara fa vita ireo haingo karazana fefy tamboho entina manafina ny trano ratsy bikan'ny "ambany tanàna". Efa tazako ihany ireo toy ny tamboho ireo teny amin'ny tetezana ho eny Ampasika Itaosy iny ka noheveriko fa haingo manokana ho an'io faritra io. Ankehitriny kosa dia nihisaka tsikelikely manaraka ny sisin'ny 67ha atsimo, Andavamamba ary Ampefiloha iny, ilay fefy tamboho amin'ny loko volom-potaka (mety ho natao ho lokon'ny tambohon'ny Ntaolo ve?). Tsoriko avy hatrany, fa raha ny fijeriko, dia tena tsy manintona velively ireo endriky ny tamboho ireo, raha ny amin'izao fotoana izao. Toy ny miverina any amin'ny zato taona lasa any ny tena, fa ratsy kely mampalahelo na ny endriny na ny lokony. Tsy mba manana manampahaizana momba ny haibika sy haiendrika (design) ve ny mpitantana eto Antananarivo amin'izao fotoana izao?
Haverina hoe ny tsenan'Anjoma?
Raha nisy ny nanaratsy endrika sy nandoto indrindra ny afovoan-tanànan'Antananarivo dia noho ny nanaovana an'Analakely manontolo ho lasa tsena. Tamin'ny voalohany, nandaminana io tsena io voalohany, dia nanana ny endriny ny fampizarazarana ny faritra ho an'ireo sokajim-barotra isan-karazany. Tamin'ny nanesorana ilay tsena kosa efa ny friperia no nanjaka nanerana ny tanàna ka na ahoana na ahoana fandresen-dahatra ataon'ny mpitantana an'Antananarivo amin'izao fotoana izao, izay tsy nofidiam-bahoaka, dia tsy ny hasin'ny tsena isan-joma no ho tafaveriny eo fa fanomezana vahana ny mpivarotra amoron-dalana hibahana manontolo ny arabe amin'ny andro zoma no dikan'ny tetikasa apetrany. Mila ny hevitry ny Besinimaro ny fanapahan-kevitra toy izao fa tsy ataotao foana. Averiko indray, ny mpivarotra amoron-dalana miaraka amin'ny vokatra shinoa no hanjaka amin'izany tsena averina izany fa tsy ho voafehinao velively izay tianao tadiavina atao eo. Fihemorana mankamin'ny fikorontanan'ny tanàna sady renivohitra izao fikasana izao.
Efa miresaka Analakely ihany. Nesorina tsikelikely amin'izay ny fefy hazo fa hosoloina fefy vy ireo zaridaina mitomandavana manaraka an'Analakely. Enga anie mba tsy ny fefy vy indray no ambenana raha ny fefy vy no miambina ny zaridaina amin'izao vanim-potoanan'ny fangalaram-by izao. Asa re hanao ahoana ny fihevitry ny besinimaro amin'ity fefy makarakara vy ity? Nolokoina maitso aloha ilay izy. Iz anefa no milaza hoe ampirisiho ny olona hanitsakitsaka ny zaridaina vao nandray ny fahefana teto Antananarivo ny filohanareo?
Fa fiara lava sa fiara fohy e?
Tsy maintsy miresaka indray mandeha ilay fiara fitaterana aho. Porofo fa tsy azo atao eto amin'ny firenena ny fanjakazakana tokana, fifandanjam-pahefana no tadiavina ary izany no mifanaraka amin'ny politika maoderina fa tsy hoe satria notoherin'ny olona ianao tamin'ny fihoaram-pahefana nataonao polisy dia tsy raharahanao intsony ny fifamoivoizana eto amin'ny tanàna. Tsarovy fa raha manao ny baranahiny ny mpitatitra dia izy hatrany no ho voa fa ny olona mitady hatrany izay tonga dia mandeha fa tsy hiaritra "vodihazo" velively. Tranga tsy maintsy ho avy ny baranahiny tsy fandraisana andraikitry ny polisy na ho ela na ho haingana noho ny tetikasan'ny Kaominina 119 io. Tsy ho azo kitihina manko ny mpitatitra an'ny Kaominina raha mety ho voateritery kosa ireo tsy miankina. Lasa aloha loatra anefa ny fanoheran'ny olona. Kopaka isasahana iarahan'ny mpanera sy ny polisy manko ny famelezana ny mpitatitra tsy maintsy manome kely ny mpanera fa izay tsy manome mpanera dia asaina amboarin'ny polisy amin'ny antontan-taratasy.
Nafindra ho any 67ha afovoany andrefana indray ny fiara fitaterana rehetra eto an-drenivohitra niantsona teo ampitan'ny Ny Havana 67ha teo aloha. Miampy 200 metatra eo ho eo indray izany ny halaviran-toerana hamonjenay fiara raha handray ireny fiara ireny izahay. Izany dia noho ny fanamboarana atao eo amin'ny fiantsonana teo aloha, hikarakaraka manokana ny fiaraben'ny Kaominina. Ny mahavariana rehefa mahita ny halavan'ny fiantsonana dia mampanontany tena hoe fa tahaka ny ahoana marina ny halavan'ny fiara e? raha ny fijery azy manko dia ahiana ho ilay tsy mahaodina ny rond-point Ambohijatovo ireo fiara ireo matoa hananganana fiantsonana manokana etsy Ambohijatovo mitodi-doha ho aty 67ha (olona 80-100). Tsy maintsy ho tezitra ihany ireo mpitatitra ireo satria tahaka ny atsasaky ny mpandeha miainga avy eo amin'ny Ny Havana no very fa ny fiara indray no milahatra vao maraina, nefa teo aloha dia ny olona no mifandrombaka fiara. Asa hanao ahoana rehefa miditra ny mpianatra?
Izay indray aloha ny tsy aritra!
Jentilisa, 24 septambra 2010 amin'ny 15:03